Madaxweynaha Hiiraan State oo sanadkan 2011-ka u rajeeyey umada Somaliyeed inuu noqondoono sanadkii nabada.
Posted by admin on January 01 2011 13:21:49
Sabti 1, Janaayo 2011 (HSOL) M/weynaha dowlad goboledka Hiran ee Somaliya oo shacabka Hiiraan State iyo Somaliweyn u rajeyeey sanadkan cusub inuu noqdo mid la mahadiyo oo qeyrkiisa wata.
Sabti 1, Janaayo 2011 (HSOL) M/weynaha dowlad goboledka Hiran ee Somaliya oo shacabka Hiiraan State iyo Somaliweyn u rajeyeey sanadkan cusub inuu noqdo mid la mahadiyo oo qeyrkiisa wata. dhibaatooyinka ka jira Hiiraan iyo guud ahaan Somaliya ayuu sheegay iney ka mid tahay masiibooyinka ku habsaday dadka iyo dalka sidaasi daraadeed ayuu yiri waa in ay umadu alaah u noqdaan oo ay cafis iyo isku tanaasul la yimaadaan si ay dalka iyo dadka u bad baadiyaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkani 2011-ka noqon doono sanadkii guusha umada Somaliyeed oo ay ka guleysan doonaan cadowka dalka iyo dadka ku soo duulay oo uu ula jeedo ururka Shabaab iyo Al qaidada Somaliya oo si ka baxsan bini aadaminimada ula dhaqmay shacabkii Somaliyeed oo ay reer Hiiraan ugu horeeyaan.
Ugu danbeyn madaxweynaha HS ayaa shacabka Hiiraan meel kasta oo ay joogaan ku booriyey iney gacmaha is qabsadaan oo ay u soo jeestaan iney ka shaqeyaan horumarka dhulka barwaaqadaa ee uu ilaah ku maneystay reer Hiiraan. sida muuqata madaxweynaha Hiiraan State ayaa hada isagu u muuqda inuu kasbaday inta badan shacabka Hiiraan tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Hiiraan State oo ay shir ka dhacay dalkaasi Kenya ku doorteen dhamaanba qabiilada reer Hiiraan waxgaradkooda, siyasiyiintooda iyo waliba aqoonyahanadooda kedib shir mudo labo sano ah laga soo shaqeynayey uu ku guuleystay xilkaan hogaamiyaha Hiiraan State oo isagu ah kumeel gaar.
Madaxweynah Hiiraan State ayaa looga fadhiyaa sidii uu maamulkan u garsiin lahaa guud ahaan gobolada Hiiraan State ay ka kooban tahay si ay bulshadu u helaan amaba mustaqbalka loo helo System ka shaqeeya gudaha Hiiraan isagoo howlaha hada horyaalo ay ugu horeeyaan dhameystirka xukumada iyo xoreynta Hiiraan oo ah labada shey ee hada horyaala dowlad goboleedka Hiiraan State ee uu garwadeenka ka yahay.